OkMap, kan ugu fiican abuurista iyo tafatirka khariidadaha GPS. BILAASH - Geofumadas
OkMap, ugu fiican ee la abuuro oo wax ka beddelo khariidadaha GPS. BILAASH AH
Sebtember, 2013 Google Earth / Maps, GPS / Qalabka, aragti ugu horeysay
OkMap waxaa laga yaabaa inuu yahay mid ka mid ah barnaamijyada ugu adag dhismaha, tafatirka iyo maaraynta qariiradaha GPS. Iyo astaamaha ugu muhiimsan: Waa Bilaash.
Dhamaanteen waxaan aragnay baahida loo qabo in la habeeyo khariidad, jaangooyooyin muuqaal ah, loo soo rogo feyl qaab ah ama kml GPS Garmin. Hawlaha kuwan oo kale ah ayaa ka mid ah kuwa ugu fudud isticmaalka OkMaps. Aan aragno qaar ka mid ah astaamaheeda:
Waxay taageertaa xogta farsamada ee qaababka ugu badan ee loo isticmaalo, oo ay ku jiraan qaabka wareega dijitaalka ah (DEM) oo leh xog la xiriirta heerarka sare.
Waxaad ka abuuri kartaa qaababka dariiqyada lakabyada, dariiqyada iyo tracks ee miiska ka dibna u gudbin GPS.
Waxay taageertaa geocode.
Xogta la qabto GPS waxaa lagu soo daabici karaa kombiyuutarka si ay u muujiyaan una falanqeeyaan noocyo kala duwan oo warbixinno ah iyo tirakoob.
Adoo xiraya laptop-ka GPS-ka waxaad ku ogaan kartaa booska khariidadaha adigoo ka soo socda shaashadda iyo haddii aad xiriir la leedahay shabakad waxaad u diri kartaa xogta fog fog waqtiga dhabta ah.
Wuxuu isku xiraa Google Earth iyo khariidadaha Google, oo ay ku jiraan xogta wadada ee 3D.
Marka lagu daro qaabka kml oo leh hufnaan ka badan sawirada jpg qaab isku dhafan, waxay awood u leedahay inay si otomaatig ah u soo saarto qaabab kmz ah oo la jaan qaadi kara maababka Garmin iyo qaabka OruxMaps. Tan waxaa ku jira mosaicda sawirrada juqraafi ahaaneed oo ay ku jiraan qaabka ECW, kuwa u tagaya sida feylasha vector-ka iyo sawirrada lagu xardhay kombaaska kmz.
Noocyada taageeraya OkMap
Nooca Raster: tif, jpg, png, gif, bmp, wmf, emf.
Habka dhulka dhijitaalka ah wuxuu taageeraa fidinta .hgt, oo ah DEM ay soo saareen NASA iyo NGA. Qaababka uu adeegsado OkMap waa SRTM-3 oo leh 3 ilbiriqsi pixel ah, qiyaastii 90 mitir iyo 1 labaad SRTM-1 oo qiyaastii ah 30 mitir.
Iyadoo DEM, OkMap ayaa sare u qaadaya heerka sare ee badda si loogu helo dhibcaha la qabtay, oo loo geeynayo xarun kasta oo GPX faylka sareeya; waxa aad ka dib dhisi karto garaafka sare ee wadada safarka ah.
Xogta DEM waxaa lagala soo bixi karaa http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1
Marka laga hadlayo xogta vektorka, OkMap ayaa soo rogi kara faylasha GPX, kuwaas oo aad loo isticmaalo maadaama ay tahay heerka isweydaarsiga. Waxay taageertaa, labadaba inaad furto oo aad keydiso:
Macluumaadka Garmin POI
Meelaha loo yaqaan 'Geocaching'
Qalabka taageerta, dhammaantood waxaa ka mid ah bedelidda faylasha isticmaalaya GPS Babel.
Tilmaamo dheeraad ah oo lagu shaqeyn karo khariidadaha GPS
Barnaamijku wuxuu u muuqdaa mid aasaas u ah, laakiin dhab ahaantii waa maskax leh wax kasta oo uu sameeyo; Waa kuwan waxyaabo kale oo aad isku dayi kartid:
Muuqaalka 'Vector' iyo 'raster' oo lagu soo bandhigo Google Earth
Meel furan oo ku yaal khariidadaha Google
Abuuri adeegga khariidada, oo leh qaabka .okm
Mosaic ee sawirrada iyo jiilka
Qaybi khariidada woqooyiga
Khariidadda cagaaran ee qashinka
Isticmaal isbedelka GPS Babel
Abuuro lakabyo waaweyn, GPX, qaabka qaabka, POI csv (Garmin) iyo OzyExplorer
Isbedel weyn oo isku-dhafan
Xisaabinta masaafada iyo xajmiga
Isku bedelida qaababka kala duwan ee vector
U dir xogta GPS
Nidaamka marin-socodka, oo lagu daro ogeysiisyada maqalka
NMEA Simulation navigation
Waxaa ku jira luuqado kala duwan, oo ay ku jiraan Isbaanish.
Guud ahaan, xalka xiisaha leh ee maaraynta khariidadaha GPS. In kasta oo ay waxtarkeedu sii socdo ujeeddooyinka hagidda, dhinacyada sida badda, kalluumeysiga, howlaha samatabbixinta, juqraafinta iyo kuwa kale ee xoogga saaraya saxnimadu maahan waxa muhiimka ah laakiin u shaqeynta juquraafiga.
Ma ahan software bilaash ah, waa xuquuq xuquuq leh, laakiin waa lacag la'aan. Waxay ku shaqaysaa kaliya Windows, waxayna ubaahantahay Framework 3.5 SP1
Soo qaado OkMap
Fiidiyowga soo socda ayaa muujinaya sida loo abuuro Garmin Custom Map iyadoo la adeegsanayo software-kan.
Post Previous" Hore Ku soo dhawow shaxda UTM ee joqraafiga adoo higsanaya Geofumadas
Post Next …hadda…Next »
Hal Jawaab “OkMap, waxa ugu fiican abuurista iyo tafatirka khariidadaha GPS. MAHADSAN "
Justiciero isagu wuxuu leeyahay:
Mahadsanid? Nooca bilaashka ahi kuu oggolaan maayo inaad ficil ahaan wax samayso, markaa bilaash waxay leedahay dhibco ...